सरोगेट मदर | चितवन पोष्ट
गृह » सरोगेट मदर
‘ह्वाट अ लब्ली कप्पल !
गड ब्लेस देम !!’
यस्तै सुनौला भविष्य साँचेर सात–सात वर्ष लामो आफ्नो प्रेमलाई विवाहको औपचारिकतामा टुंग्याएका थिए तिनीहरुले । त्यो सम्बन्ध कति पाको थियो दुवैका लागि । जोनले त्योभन्दा अगाडि आठवटा असफल प्रेम व्योहोरेको थियो भने जेनिशाले सातवटा त्यस्ता अत्यास लाग्दा कहरहरु काटेकी थिई, आजको दिनसम्म आइपुग्दा । अब बढी त्यस्ता सस्ता प्रेम र डेटिङमा नहराउने संकल्पले ती दुई जोडी एकआपसमा गाँसिएका थिए । तिनलाई सात–सात वर्षको कठोर परिश्रमले सिञ्चेका थिए । खारेका थिए तिनीहरु प्रेमको साँचो परीक्षामा । तीसको उत्तरार्धमा थालिएको त्यो वैवाहिक सम्बन्ध चालीसको पूर्वार्धमा मात्र सन्तान प्र्रािप्तका लागि तयार भएको थियो । एउटा पूर्ण चाहनामा होमिएको थियो ।
पहिलो गर्भको उत्कट खुसी मात्र केही हप्तामा मिस क्यारेजमा टुंगियो । दोस्रो प्रिग्नेन्सी बाल बाल बाँच्ने घटना बन्यो । इक्टोपिक प्रिग्नेन्सीले दाहिनेपट्टिको फेलोपिन ट्युब काटेर फाल्नुप¥यो । केही घन्टा मात्र ढिला भएको भए जीवन सकिन सक्थ्यो जेनिशाको । सन्तान प्राप्तिका यस्ता दर्जनौँ हृदयविदारक ट्रेजेडीहरुको तिनीहरुले सामना गरिरहे । युरोपको केन्द्र बेलायत आधुनिक मेडिकल साइन्सका यावत् सुविधाहरु भएर पनि त्यो जोडीलाई सन्तानसुखको सुयोग कहिल्यै मिलेन ।